Banijya News | » खेलकुदबाट सबैभन्दा बढी पैसा कमाउनेमा सन्दीप लामिछाने , कती कमाउछन् त सन्दीप ? खेलकुदबाट सबैभन्दा बढी पैसा कमाउनेमा सन्दीप लामिछाने , कती कमाउछन् त सन्दीप ? – Banijya News
खेलकुदबाट सबैभन्दा बढी पैसा कमाउनेमा सन्दीप लामिछाने , कती कमाउछन् त सन्दीप ?
विहीवार, कार्तिक १४, २०७६
काठमाडौं, । नेपाली खेलाडीमध्ये खेलकुदबाट सबैभन्दा बढी पैसा कमाउनेमा सन्दीप लामिछाने भएका छन् । उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय लिगमा अनुबन्धित हुने देखि विज्ञापनबाट करोडौं कमाएका छन् । जुन नपाली खेलाडीमध्ये अहिलेसम्मकै उच्च हो ।
नेपाली खेलाडीमध्ये अन्तर्रा्ष्ट्रिय लिगमा अनुबन्धित भएर करोडभन्दा बढी रकममा अनुबन्धित हुनेमा उनकै नाम आएको छ । यसअघि कुनैपनि नेपाली खेलाडी यति ठूलो रकममा अनुबन्धित भएका थिएनन् । सन्दीपलाई ओभल इन्भेन्सीबल्समा एक लाख पाउण्डमा अनुबन्धित गरेको छ । जुन डेढ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबर हुनआउँछ ।
नेपाली लेग स्पिनर सन्दिप लामिछाने आईपीएल खेल्ने पहिलो नेपाली हुन् । आईपीएलको बेन्गलुरुको अक्सनमा सन्दिपलाई दिल्ली डेयर डेभिल्स टिमले २० लाख भारतीय रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो।
सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि ले उनलाई तीन वर्षको अनुबन्धमा हस्ताक्षर गरेको छ साथै उनलाई टाटा टिगोर कारबाट पुरस्कृत गरेको छ । यती कार्पेटले लामिछानेलाई नेपाली एक लाखले पुरस्कृत गरेको छ । यतीले उनलाई आई पि एलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको कारण पुरस्कृत गरेको हो।
सन्दीप विभिन्न कम्पनिको उत्पादनको विज्ञापनमा आवद्ध छन् । यसबाट उनले लाखौं आम्दानी गर्छन् । यसबाट उनको कमाई दुई करोड नाघिसकेको छ।